KAMUU XISHOON: Kabtan Chiellini Oo Tii Ugu Darnayd Ka Sheegay Tababarihiisa Maurizio Sarri & Waxa Ay Ka Yeelaan Marka Uu Sigaar Ku Buufiyo - Gool24.Net
KAMUU XISHOON: Kabtan Chiellini Oo Tii Ugu Darnayd Ka Sheegay Tababarihiisa Maurizio Sarri & Waxa Ay Ka Yeelaan Marka Uu Sigaar Ku Buufiyo
Daafaca ahna kabtanka kooxda Juventus ee Giorgio Cheillini ayaa shaaca ka qaaday sheeko cusub oo la xidhiidha tababaraha kooxdiisa xilli ciyaareedkii koowaad ku qaadanaya ee Maurizio Sarri.
Cheillini ayaa soo saaray dhawaan buug uu isagu qoray oo uu kaga faaloonayo waxyaabo badan oo uu arkay inta uu kusoo dhex jiray kubadda cagta waxaana kamid ah shaqsiyaadka uu ku duray Mario Balotelli iyo Felipo Melo isagoo sidoo kale kaga hadlay dhacdadii Ramos vs Salah ee 2018-kii.
Arrinta yaabka leh ee uu haatan buuga ku sheegay Cheillini ayaa ah mid la xidhiidha sigaar cabista oo ah caado uu leeyahay tababare Maurizio Sarri kaas oo aan xataa joojinin kaddib markii uu dhawaan xanuun cunaha ka haleelay.
Cheillini ayaa hadalka uusan kaga xishoon tababarihiisu uu yahay inuu sheegay in haddii ay doonayaan inay la hadlaan isaga ay u tagaan kahor inta aysan jidhka maydhan ee ay dhididka leeyihiin maadaama haddii iyaga oo maydhay ay u galaan uu sigaarkiisu ka uri doono.
Arrinta caddaynta ugu filan in Sarri uu aad u jecel yahay inuu sigaar badan cabo ayaa ah inuu qirtay inuu qiyaastii hal maalin oo kasta cabo 60 xabo oo sigaar ah waana tiro waali ah.
“Waxa uu leeyahay shaqsiyad aad u xidh-xidhan, isagu ma ogolaado in wax badani qasmaan” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay kabtanka Bianconeri oo ugu horreynba ka hadlay dabeecada Sarri ee hore shaqsiyaad badani ugu sheegeen mid qalafsan.
“Waxa kaliya ee uusan qofna awoodin inuu bedelo waa sida ba’an ee uu ugu dhagan yahay sigaarka, waxaad kaliya ugu tagi kartaa isaga xafiiskiisa oo aad la hadli kartaa kahor inta aanad qubaysan, adiga oo wali xidhan garankaad ku ciyaaraysay, sababtoo ah haddii kale ur xun oo sigaar ah ayaa naga uri doonta”